အမျိုးသမီး Viagra? အဆိုပါလိင် Enhancer Flibanserin အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို
/ဘ‌‌လော့ခ်/Flibanserin/အမျိုးသမီး Viagra? အဆိုပါလိင် Enhancer Flibanserin အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို
အပေါ် Posted 12 / 17 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Flibanserin.
1.Flibanserin အမှုန့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Flibanserin 2.What လား?
3.What Flibanserin အမှုန့်ဖြစ်သနည်း 4.What ရဲ့အမျိုးသမီး HSDD?
၅။ အမျိုးသမီး HSDD ကုသမှုကဘာလဲ။ 6.How Flibanserin အမှုန့်အလုပ်လုပ်သလား
လုပ်ဆောင်ချက် 7.Flibanserin အမှုန့်ယန္တရား ၈။ Flibanserin နှင့် Sildenafil / viagra တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
9.Is Flibanserin အမှုန့်ကိုလုံခြုံ? 10.What အတှကျအသုံးပွု Flibanserin အမှုန့်ဖြစ်သနည်း
11.How Flibanserin အမှုန့်အသုံးပြုသင့်သလဲ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ flibanserin အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် 12.What?
Flibanserin ၏ 13.Dosage Flibanserin ၏ 14.Warning
Flibanserin ၏ 15.What ရဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု? 16. Flibanserin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များဝယ်ယူခြင်း
17.Where Flibanserin ကုန်ကြမ်း Powder ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
AASraw သည် tadalafil, dapoxetine, flibanserin ကဲ့သို့သော enchancing မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 225 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Flibanserin အမှုန့်များသောအားဖြင့် Flibanserin ဆေးပြား / ဆေးပြားသို့ဖန်ဆင်းမူးယစ်ဆေး Flibanserin များ၏ကုန်ကြမ်း, အမျိုးသမီးဖြစ်ပါသည် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်လိင်, ရန်အသုံးပြုသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမြှင့်တင်ရန် နှင့် hypoactive လိင်ဆန္ဒဆန္ဒ (HSDD) ရှိသည့် premenopausal အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ flibanserin ကို“ Viagra အမျိုးသမီး” ဟုခေါ်သော်လည်း၎င်းလုပ်ဆောင်ပုံသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Viagra။ flibanserin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ restore ကိုကူညီပေးဖို့ဦးနှောက်ထဲမှာ neurotransmitters တစ်ခုမညီမမျှဆုံးအားဖြင့်ပိုပြီးလက္ခဏာတူသောအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါသော်လည်း Viagra သည်လိင်အင်္ဂါမှသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ dopamine, norepinephrine နှင့်ဦးနှောက်အတွက် serotonin အဆင့်ဆင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
flibanserin ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးဝြေခင်း, ပျို့ခြင်း, အိပ်ပါဝင်သည်။ Flibanserin လည်းအရက်အတူအသုံးပြုသောအထူးသဖြင့်အခါ, နေခြင်းဖြင့်သတိလစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျဆိုင်ထဲကနေ Flibanserin ဝယ်နိုင်သို့မဟုတ် Flibanserin အွန်လိုင်းဝယ်ဖို့စျေးကွက်မှာတော့ Flibanserin ၏ puirty 60-98% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဝယ် Flibanserin အမှုန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသောအခါ, အရေးအပါဆုံးအရာဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖြစ်၏။
အဘယ်အရာကို Flibanserin ပါသလဲ Flibanserin အမျိုးသမီး hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါ (HSDD) ဆက်ဆံဖို့တီထွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ HSDD နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ကြောင်းလိင်စိတ်ဝင်စားမှုတစ်နာတာရှည်မရှိခြင်းရှိသည်။ HSDD လည်းဒုက္ခဆင်းရဲ၏ခံစားချက်များကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ flibanserin "အမျိုးသမီး Viagra" ဟုခေါ်တော်မူသို့သော်သက်တမ်းအတော်လေးတိကျမှုမရဖြစ်ပါတယ်။ Viagra လိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ယောက်ျားနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ဦးနှောက်ကိုအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ Flibanserin ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဦးနှောက်ကိုမကြာခဏအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အကိုပိုမိုအရေးကြီးသောစဉ်းစားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါ။ သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာများစွာသူမ၏ဦးနှောက်အတွင်းအစပြု။
dopamine, norepinephrine နှင့် serotonin: Flibanserin သုံးအရေးကြီးသောဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဓာတုပစ္စည်း neurotransmitters ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဦးနှောက်နဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအကြားအချက်ပြပေးပို့ခြင်းတာဝန်ရှိသည်။
Dopamine နှင့် norepinephrine နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု။ သို့သော် serotonin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်လိင် drive ကိုလြော့စေနိုင်သည်။ အဲဒီဓာတုပစ္စည်းချိန်ခွင်လျှာထဲကလျှင်ထင်နေသည် - dopamine နဲ့ norepinephrine အဆင့်ဆင့်လည်းနိမ့်များမှာနှင့် / သို့မဟုတ် serotonin အဆင့်ဆင့်လည်းမြင့်မားတဲ့မှန်လျှင် - အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချနေစဉ်အတွင်းလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ desire.Flibanserin dopamine နဲ့ norepinephrine ၏ပြုစုပျိုးထောင်အဆင့်ဆင့်တို့ကအလုပ်လုပ်တယ်ခံစားရစေခြင်းငှါ, serotonin ။ ဤနည်းအားဖြင့်, ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမြှင့်တင်ရန်ကူညီ တိုးမြှင့်နေကြသည်နှင့်အလိုဆန္ဒဖိနှိပ်နိုငျကွောငျးတစျခုလျော့နည်းသွားသည်။
Flibanserin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်၊ t, Bimt 17, Bimt-17-BS, Girosa; 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) phenyl] -1-piperaziny ဌ] ethyl] -; Flibanserin; Bimt17; 3- [2- [ 4- [4- (Trifluoromethyl) phenyl] piperazin-1-yl] ethyl] -1H-benzimidazol-2-one; Filbanserin; Flibanerins; 1,3-Dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) ) phenyl] -1-piperazinyl] ethyl] -2H-benzimidazol-2-one သည်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်တစ်မျိုးဖြစ်သော Flibanserin မှပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၊ steroids ထုတ်ကုန်များရောင်းချသောများသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းမှမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော Flibanserin အမှုန့်များကို ၀ ယ်သည်။ Flibanserin အမှတ်တံဆိပ်သည် Flibanserin ၏အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် -
အရည်ပျော်မှတ်: 225 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp .: RT ကို
အရောင်: White ကပုံဆောင်ခဲအမှုန့်
Flibanserin အမှုန့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ဟော်မုန်း?
Flibanserin တစ် hormore ဖြစ်ပါသည်? မဟုတ်ပါအီစထိုဂျင်ဆံ့သို့မဟုတ်မပါဘူး testosterone ဟော်မုန်း သို့မဟုတ်အခြားဟော်မုန်း။ တစ်ဦးစိတ်ကိုဆေး Flibanserinis ။ ဒါဟာ အထူးသဦးနှောက်ထဲမှာ serotonergic အာရုံခံအပေါ်ပြုမူနှင့် dopamine နဲ့ norepinephrine အပေါ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်အပေါ်ဘရိတ်ထားရန်စဉ်းစားနေသည်။ Flibanserin ဟာ serotonin ဘရိတ်စနစ်ကပေါ်တက်လျော့ပါးကူညီစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်လိင်စိတ်ကိုထပ်မသွားရနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး HSDD ကဘာလဲ?
ထို့အပြင်အမျိုးသမီး Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire.Female Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Disorder (HSDD) ၏မရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုခေါ်တွင် HSDD, လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ ၎င်းသည်ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်လူ့အသိုက်အ ၀ န်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ HSDD သည်အသက် ၂၀ မှ ၄၉ နှစ်အတွင်းရှိအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများ၌လိင်ခွဲစိတ်ကုသမှုလွန်ကဲသောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ပျံ့နှံ့ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပြီး HSDD နှင့်ရောဂါလက္ခဏာပြခံရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ပိုများသည်။ နှင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအပြီးတွင်သွေးဆုံးပြီးခွဲစိတ်မှု။
သငျသညျအောကျပါအရိပ်လက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိတဲ့အခါဒီ HSDD တယ်စေခြင်းငှါ:
အနိမ့်လိင် drive ကို
အနိမ့်လိင် Drive နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးတခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိနေသော်ငြားလည်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ
HSDD, အဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အပါအဝင်အချက်များစွာကိုများစွာသောလူတို့ကစသည်တို့ကိုကိုယ်ဝန်, ကလေးမွေးဖွား, ဒါမှမဟုတ်သွေးဆုံး, နာမကျန်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, ကြောင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်
အမျိုးသမီး Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Disorder ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မရှိခြင်းနှင့်ယင်းသို့သောချို့ယွင်းချက်များအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲများပါဝင်သည်
ကြောင့် HSDD အမျိုးသမီးများအတွက်နုတ်မလိင် Drive ကိုတစ်ရောဂါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟော်မုန်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ပါဝင်နိုင်
HSDD အလားအလာအများကြီးအကြောင်းတရားများအချက်များရှိသည်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသမှုများသောအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်
အမျိုးသမီးများ၏တစ်ဦးကအများစု Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Disorder များအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားများ၏ကုသမှုမှအကျိုး
အမျိုးသမီး HSDD ကုသမှုကဘာလဲ?
တခါတလေပဲသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားလက်ဆုံသင့်ရဲ့ HSDD ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. နှင့်သင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအတိတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအကြောင်းကိုသင်မေးစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြောဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းနောက်ခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများရှာပေမည်။ သငျသညျနောက်ဆုံးတွင်အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်စေခြင်းငှါ:
ဟော်မုန်းကုထုံး။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအချို့သောလူတို့သညျအဘို့အအမျိုးသမီးများနှင့် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ဘို့ဟော်မုန်း balancing ကုထုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးပြောင်းလဲနေတဲ့။ တခါတရံမှာ HSDD ၏ပြဿနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူနှောင့်ယှက်ကြောင်းတစ်ရပ်အဟောင်းတွေ psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးကနေဥပမာ, နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအသစ်များမူးယစ်ဆေးတွေထဲကမှ, ဆေးဝါးများပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Levodopa ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုအဖြစ် - - နောက်ခံအခြေအနေများအဘို့အခြို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထို့အပြင်ဥပမာအားဖြင့် neurostransmitter dopamine ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်အသုံးပြုပုံအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူကူညီတွေ့ရှိထားသည်။
ထို့အပြင်သုတေသီများဆေးကုသမှုရွေးချယ်စရာများစွာ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုလေ့လာနေကြသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းများစွာထုတ်လုပ်သည်အဘယ်မှာရှိ - ဤသွေးဆုံးသို့မဟုတ်သားဥအိမ်၏ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ထောကျအကူပွုသက်သေပြခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများ, များအတွက် testosterone ဟော်မုန်း patch ကိုပါဝင်သည်။ နှစ်ဦးကစိတ်မကျဆေး Antidepressants, flibanserin နှင့် bupropion, Pre-သွေးဆုံးအမျိုးသမီးတွေကုသမှုထဲမှာလေ့လာခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားရှိပါတယ်။
ဘယ်လို Flibanserin အမှုန့်အလုပ်လုပ်သလား
Flibanserin သည်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျမှုကိုကုသရန်၊ အမျိုးသမီးများအတွက် hypoactive လိင်ဆန္ဒဆန္ဒ (HSDD) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောခံတွင်းဆေးဖြစ်သည်။ Flibanserin သည် dopamine နှင့် norepinephrine ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် serotonin အဆင့်ကိုလျှော့ချသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လိင်အလိုဆန္ဒကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ဓာတုပစ္စည်းများတိုးပွားလာပြီးအလိုဆန္ဒကိုဖိနှိပ်နိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများလည်းလျော့နည်းသွားသည်။ Flibanserin သည် ဦး နှောက်၏inရိယာများ၌လိင်အလိုဆန္ဒနှင့်အခြားပျော်စရာကောင်းသောခံစားမှုများကိုထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်အာရုံကြောများကြားဆက်သွယ်မှုကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အာရုံကြောများသည် neurotransmitter ဟုခေါ်သောဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ကြသည်။ neurotransmitter တွေကအနီးအနားရှိအာရုံကြောများဆီသို့သွားပြီးအာရုံကြောရှိ receptors များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ Neurotransmitter ၏ပူးတွဲမှုကအနီးအနားရှိအာရုံကြောများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်တားဆီးနိုင်သည်။ dopamine type4နှင့် serotonin type 2A, 2B နှင့် 2C receptors အပါအ ၀ င်အာရုံကြောများပေါ်ရှိ receptor များအား Flibanserin ကပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၎င်းသည် serotonin type 1A ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီဆိုးကျိုးတွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့လိင်ဆန္ဒကိုဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်များက flibanserin သည်လိင်စိတ်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွားသော premenopausal အမျိုးသမီးများမှလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်၏နေရာများကိုထိန်းညှိနိုင်သည်ဟုယူဆသည်။
လုပ်ဆောင်ချက် Flibanserin အမှုန့်ယန္တရားကဘာလဲ?
အဆိုပြုထား Flibanserin အမှုန့် အတိအကျယန္တရားကိုလုံးဝမသိရပေမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအများအပြားဟာဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းများစည်းမျဉ်းပါဝငျသညျ။ Flibanserin FDA ကရှင်းလင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက်မှတ်ချက်ချအဖြစ်တစ် Post-Synaptic 5HT1A အဲဒီ receptor agonist နှင့် 5HT2A အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်တယ်, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သော / တားစီးတာဝန်ရှိသည်) serotonin ၏အဆင့်ဆင့်ကျဆင်းနေချိန်မှာ flibanserin, (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားတာဝန်ရှိသည်နှစ်ဦးစလုံး) dopamine နဲ့ norepinephrine တစ်ခုမညီမမျှအလျောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Flibanserin တစ်ဦးဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးမဟုတ်ပါဘူးနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားဘို့အတည်ပြုမူးယစ်ဆေးအတန်းနဲ့တူသွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်ပါဘူး။
Flibanserin နှင့် Sildenafil တို့၏ကွာခြားချက် (Addyi vs)
ပထမဦးဆုံးအထင်ရှားဆုံးနှင့်အပေါ်ယံခြားနားချက်နှင့်အတူ dispense ၎င်းထိုသို့ Addyi ပန်းရောင်နေစဉ် Viagra, အမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူပြဿနာများဆက်ဆံဖို့ပထမဦးဆုံးဆေး, အရောင်အပြာကြောင်းကိုမှတ်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အခြားအထီးခွန်အားမရှိခြင်းဆေးဝါးများဖြစ်ကောင်းသာကိစ္စရပ်များရှုပ်ထွေးမယ်လို့အရောင်များအမျိုးမျိုးအတွက်လာကတည်းကဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာအဖြစ် Viagra ကို select ရန်နောက်ထပ်ယုတ္တိအကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
Viagra (sildenafil) ကပိုပြီးလွယ်ကူသင်ျခြိုယောက်ျားရကာစိုက်ထူထားရန်အဘို့အအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေစဉ် Addyi, flibanserin ဖြစ်သောများ၏တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း, ပစ်မှတ်, အမျိုးသမီးများအတွင်းလိင်အလိုဆန္ဒလျော့သွားသည်။
တချို့ယောက်ျားလည်းလိင်စိတ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခံရပေမဲ့, အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက် Viagra စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မအချက်များပေါင်းစပ်ရာမှတစ်ဦးသက်သက်သာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာသို့မဟုတ်ပင်မဖြစ်နိုင်သည့်, ပန်ကာမှအလိုဆန္ဒ၏မီးတောက်များကူညီပေးသည်။ အကြံပေးခြင်း, စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့်လူသားရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆေးဝါးထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် Viagra နှင့်အခြားအထီးခွန်အားမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများသူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်ဘာမျှမပြုကြလိမ့်မည်။
Viagra ဒါခေါ် PDE5 inhibitors ၏ပထမဦးဆုံးခဲ့လိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ယောက်ျားနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ဦးနှောက်ကိုအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ Flibanserin ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဦးနှောက်ကိုမကြာခဏအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အပိုအရေးကွီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ dopamine, norepinephrine နှင့် serotonin: သူမ၏ brain.Flibanserin သုံးအရေးကြီးသောဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်အတွက်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာများစွာတင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားဓာတုပစ္စည်း neurotransmitters ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဦးနှောက်အာရုံကြော system.Flibanserin serotonin ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချနေစဉ်အတွင်း dopamine နဲ့ norepinephrine ၏အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေတဆင့်ဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအကြားအချက်ပြပေးပို့ခြင်းတာဝန်ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမြှင့်တင်ရန်ကူညီဓာတုပစ္စည်းတိုးမြှင့်နေကြသည်နှင့်အလိုဆန္ဒဖိနှိပ်နိုငျကွောငျးတစျခုလျော့နည်းသွားသည်။
flibanserin နှင့် Viagra နှင့်အခြားအထီးခွန်အားမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးအများစုအကြားတစ်ဦးကအလွန်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုသူတို့ယူနေကြပုံဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါ, flibanserin နေ့စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရာအရပ်ကိုယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခင်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Viagra နှင့်အခြား PDE5 inhibitors ၏တဦးတည်းပေမယ့်အားလုံးတစ်နာရီမှတစ်ဦးအဖြစ်လိုအပ်နေသောအခြေခံပေါ်မှာပုံမှန်အားဖြင့် 30 မိနစ်ကိုယူနေကြသည်။ အထီးခွန်အားမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများတို့တွင်တဦးတည်းခြွင်းချက်လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာအခါတိုင်းယောက်ျားတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်နေ့စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ဖြစ်သော Daily သတင်းစာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် Cialis ဖြစ်ပါသည်။
အရက်သောက်, ရံဖန်ရံခါနေခြင်းဖြင့်သတိလစ်ခြင်း, သွေးဖိအားတစ်ခုကျဆင်းမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ flibanserin ၏လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်သင်တန်းသားများကိုအစီရင်ခံအသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ထိနမိဒ္ဓဖြစ်ကြသည်။
Viagra လည်းအတူတူပါပဲကျင့်သောနိုက်ထရိတ်-based မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုသဟဇာတစေသည်ဖြစ်သောသွေးပေါင်ချိန်အတွက်ယာယီတစ်စက်, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ငယ်အပြာရောင်ဆေးလုံး၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးယစ်ဆေးများဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုအပေါ်သို့ပျောက်ကွယ်သွားလေ့အရှိဆုံးအရာ၏, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ရင်, ကြွက်သားနာကျင်မှုသို့မဟုတ်နူးညံ့ကြင်နာမှု, နှာခေါင်းကြောပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်ပျို့ချင် flushing ပြန်နာကျင်မှုဖြစ်ကြသည်။ Viagra ပိုမိုလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရုတ်တရက်ကြားနာဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ထက်လေးနာရီကြာတဲ့စိုက်ထူပါဝင်သည်။
Is Flibanserin အမှုန့် လုံခြုံလား။ ငါလူအများအာရုံစိုက်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်နိုင်သည်အလောင်းအစား။ FLibanserin သည် FDA ကသတ်မှတ်ထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအလိုဆန္ဒနိမ့်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်လူ့အခက်အခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် hypoactive လိင်ဆန္ဒဆန္ဒပြdesireနာများအတွက် FDA ကအတည်ပြုထားသော "hypoactive လိင်ဆန္ဒတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ" အတွက်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ တွဲဖက်တည်ရှိနေသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအခြေအနေ၊ ဆက်ဆံရေးအတွင်းပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
ယင်း၏ဖောင်းပွအမျိုးသမီးတွေကူညီပေးနေထက်အမြတ်အစွန်းအကြောင်းပိုမိုကြောင်းအနည်းဆုံးသို့မဟုတ် - ဒါ့အပြင် $ 1 ဘီလီယံကနေဒါကုမ္ပဏီ Valeant အားဖြင့် Addyi ရဲ့ထုတ်လုပ်သူ, အညှနျ့ဆေးဝါးများ၏လျင်မြန်စွာ Post-licensure ဝယ်ယူ, Addyi အံ့သြစရာမူးယစ်ဆေးအချို့ကိုမျိုးကြောင်းကိုဆိုလို။ ထိုအခါသက်သေအထောက်အထားနည်းနည်းထွက်သမုတ်သော။
၎င်းသည်တရား ၀ င်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားရန်လိုအပ်သော်လည်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမပြုရနှင့်အခြားအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်မှပြောမည်။
အတှကျအသုံးပွု Flibanserin အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
သွေးဆုံး (အသက်တာ၏ပြောင်းလဲမှု; လစဉ်ရာသီကာလ၏အဆုံး) ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်သူ, ကျနော်တို့မတိုင်မှီကဆိုပါတယ်သောအရာကိုအဖြစ်, Flibanserin hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါ (ဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်လူ့အခက်အခဲဖြစ်စေသည်တဲ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ HSDD) နဲ့အမြိုးသမီးမြားဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုသည်။ Flibanserin သွေးဆုံးမှတဆင့်သို့မဟုတ်အမျိုးသားများတွင်ပြီသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့သူကိုအမျိုးသမီး HSDD ၏ကုသမှုများအတွက်မသုံးသင့်ပေ။ Flibanserin တစ် serotonin အဲဒီ receptor 1A agonist / serotonin အဲဒီ receptor 2A ရန်ကိုခေါ်ဆေးတစ်လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin နှင့်အခြားသဘာဝအတ္ထုများ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ဘယ်လို Flibanserin အမှုန့်အသုံးပြုသင့်သလဲ
Flibanserin အမှုန့်များသောအားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ယူမယ့်တက်ဘလက်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်နားမှာနေ့တိုင်းတခါယူသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ flibanserin ယူပါ။ ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန် Follow, သင်နားမလည်ကြဘူးဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးမေးကြည့်ပါ။ ညွှန်ကြားအဖြစ်အတိအကျ flibanserin ယူပါ။ ဒါကြောင့်ပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းယူသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏသင့်ရဲ့ doctor.If သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ကုသ 8 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်ဆရာဝန်မခေါ်ကြဘူးများကသတ်မှတ်ထားသည့်ထက်ယူမထားပါနဲ့။
ယူမီ flibanserin အမှုန့်
သငျသညျ flibanserin မှမတည့်လျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြအခြားဆေးဝါးများ, ဒါမှမဟုတ် flibanserin တက်ဘလက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများမဆို။ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးမေးပါသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများများစာရင်းကိုများအတွက်ဆေးဝါးလမ်းညွှန်စစ်ဆေးပါ။
သငျသညျကိုယူပြီးသို့မဟုတ်ယူစီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကတခြားဆေးညွှန်းများနှင့် nonprescription ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်, အာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်း, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြပါ။ အဆိုပါအရေးကြီးသတိပေးချက်အပိုင်းများနှင့်အောက်ပါတစ်ခုခုအတွက်စာရင်းဆေးဝါးများဖော်ပြထားခြင်းရန်သေချာစေပါ: ထိုကဲ့သို့သော fluoxetine အဖြစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants (Prozac, Sarafem); antifungal; cimetidine (Tagamet); digoxin (Lanoxin); diphenhydramine (Benadryl); စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါများအတွက်ဆေးဝါးများ, ထိုကဲ့သို့သော carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, အခြားသူများ), phenobarbital နှင့် phenytoin (Dilantin, Phenytek) အဖြစ်သိမ်းယူမှုများအတွက်ဆေးဝါးများ, opiate (မူးယစ်ဆေးဝါး) နာကျင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဆေးဝါးများ, ပါးစပ် contraceptives; dexlansoprazole (Dexilant), esomeprazole (Nexium, Vimovo), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), သို့မဟုတ် rabeprazole (Aciphex) အပါအဝင်ပရိုတွန် pump inhibitors; ranitidine (Zantac); rifabutin (Mycobutin); rifampin (တော်လ်ရီဖက်အတွက် Rifamate အတွက် Rifadin, Rimactane,); sedatives; sirolimus (Rapamune); အိပ်ပျော်နေသောဆေးပြား; နှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ဆေးဝါးများ၏ဆေးများကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့အဂရုတစိုက်သင်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
သငျသညျကိုယူပြီးနေကြသည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသောအရာကိုထုတ်ကုန်သင့်ဆရာဝန်, အထူးသဖြင့် ginkgo, Resveratrol နှင့်စိန့် Johns wort ပြောပြပါ။
သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျလျှင်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာရန်စီစဉ်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြ, ဒါမှမဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးကြသည်။ flibanserin ယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။ flibanserin ယူပြီးစဉ်မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ-feed ကိုလုပ်ပါ။
သငျသညျ flibanserin သငျသညျငိုစေခြင်းအလိုငှါငါသိ၏သငျ့သညျ။ ကားတစ်စီးမောင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး6နာရီ flibanserin သင့်ရဲ့ထိုးပြီးနောက်မှီတိုင်အောင်သင်သည်ဤဆေးသငျသညျကိုသာသက်ရောက်ပုံကိုမသိမှီတိုင်အောင်စက်ယန္တရားလည်ပတ်မထားပါနဲ့။
သငျသညျ Flibanserin ယူနေစဉ်, ဤအာရုံစိုက်ကျေးဇူးပြုပြီး:
ဒီဆေးဝါးကိုယူပြီးစဉ် Flibanserin နှင့် flibanserin ယူပြီးနေချိန်မှာအရက် Alcohol.Consuming အန္တရာယ် reactions.Avoid အရက်သောက်အရက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင် Flibanserin ကိုသောက်နေစဉ် Grapefruit ကိုမသောက်ပါနှင့်။ flibanserin၎အသီးကိုသင်၏ body.Flibanserin အတွက်မူးယစ်ဆေးအမှုတော်တို့ကိုသငျသညျမူးသို့မဟုတ်ပင်ပန်းစေခြင်းငှါဘယ်လိုအတူအပြန်အလှန်ပေလိမ့်မည်။
ဤဆေးသည်သင့်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုသင်သိသည်အထိနိုးနိုးကြားကြားလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုမမောင်းနှင်ပါနှင့်။ သင် flibanserin ကိုသောက်ပြီးသည့်နောက်အနည်းဆုံး ၆ နာရီခန့်မောင်းနှင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဤဆေးသည်သင့်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ မူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းသည်ရေတံခွန်သို့မဟုတ်အခြားမတော်တဆမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ginkgo၊ resveratrol သို့မဟုတ် St. John's wort ပါ ၀ င်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုမသုံးပါနှင့်။
တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ကနေအရမ်းမြန်ဆန်စွာတက်လာပြီသို့မဟုတ်အနေအထားလဲလျောင်းရှောင်ကြဉ်ပါ, သို့မဟုတ်သင်ခေါင်းမူးခံစားရပေမည်။ ဖြည်းဖြည်းတက် Get နှင့်တစ်ဦးကျဆုံးကာကွယ်တားဆီးဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြံ။
Flibanserin ကိုယူပြီးနောက်၎င်းကိုမည်သို့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည်ကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ယခုလေ့လာကြည့်ကြစို့။
လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ကလေးငယ်များနှင့်အခြားလူများကသူတို့ကိုမပယ်မရှားနိုင်မသေချာစေရန်အထူးနည်းလမ်း၏စွန့်ပစ်ရပါမည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအိမ်သာကဆင်းကဒီဆေးကိုရှင်းလင်းရန်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ဆေးဝါးများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတစ်ဆေးပညာယူ-ပြန်ပရိုဂရမ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးစကားပြောသို့မဟုတ်သင့်ရပ်ရွာထဲတွင်ယူ-ပြန်အစီအစဉ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သင့်ဒေသခံအမှိုက်သရိုက် / ပြန်လည်ဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
တခြားဘာမူးယစ်ဆေးဝါးများ flibanserin ထိခိုက်စေလိမ့်မည်နည်း
သငျသညျအိပ်ချင်စေသည့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဤဆေးဝါးယူပြီးသို့မဟုတ်သင့်သွေးပေါင်ချိန်ကဒီသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်လျှော့ချ။ ယူမီသင့်ဆရာဝန်ကိုမေး flibanserin တစ်ဦးအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုဆေးလုံး, မူးယစ်ဆေးဝါးနာကျင်မှုဆေးပညာ, ကြွက်သားအပန်းဖြေ, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်သိမ်းယူမှုများအတွက်ဆေးဝါးနှင့်အတူ။
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေး;
စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort ။
ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆေးညွှန်းများနှင့် over-the-counter ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်အပါအဝင် flibanserin နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ interaction ကဒီဆေးဝါးလမ်းညွှန်ထဲမှာစာရင်းသွင်းကြသည်မဟုတ်။
၏သောက်သုံးသောအကြံပြု Flibanserin 100 အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာတခါတစ်နေ့လျှင်နှုတ် mg ဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုမှု: သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်လူ့အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်တစ်ဦး Co-တည်ဆဲဆေးဘက်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်မပေးကြောင်းအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်ဝယ်ယူ, General hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါ (HSDD) နဲ့ premenopausal အမျိုးသမီးများ၏ကုသမှု, ဆက်ဆံရေးအတွင်းမှာပြဿနာတွေ, ဒါမှမဟုတ် တစ်ဦးဆေးသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးပစ္စည်းဥစ္စာများ၏သက်ရောက်မှုများ။
အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့ CYP450 3A4 တား၏အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဒီမူးယစ်ဆေးအစပြုလျှင်:
အဆိုပါ CYP2 450A3 inhibitor ၏နောက်ဆုံးထိုးပြီးနောက်ဒီမူးယစ်ဆေး4ရက်သတ္တပတ် -Start ။
ဒီမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့ CYP450 3A4 တားပြီးနောက်အသုံးပြုမှုအစပြုလျှင်:
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏နောက်ဆုံးထိုးပြီးနောက် CYP450 3A4 inhibitor2ရက်ပေါင်း -Start ။
သင်တစ်ဦးအလွန်အကျွံသုံးစွဲသံသယရှိလျှင်, immediately.You 800-222-1222 မှာအဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာနနှင့်အတူထိတွေ့ရနိုင်မယ့်အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာဆက်သွယ်ပါ။
သငျသညျ flibanserin တစ်ထိုးလက်လွတ်လျှင်, နက်ဖြန်နေ့၌အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာသင်၏နောက်ထိုးယူပါ။
အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ CYP3A4 inhibitors နှင့်အတူ Contraindicated
အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ CYP3A4 inhibitors တိုးနှင့်အတူ Coadministration flibanserin ပြင်းထန် hypotension နှင့် syncope ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ပြင်းအား,
ထို့ကြောင့်, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ CYP3A4 inhibitors ၏အသုံးပြုမှုကို contraindicated ဖြစ်ပါတယ်
Hepatic ချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာအတွက် Contraindicated
Hepatic ချို့ယွင်းမဆိုဒီဂရီနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက် Contraindicated
Flibanserin ထိတွေ့မှု, hypotension ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်, သာမန် Hepatic function ကိုအတူသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် Hepatic ချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာအတွက် syncope 4.5-ခြံတိုးတက်နှင့် CNS စိတ်ကျရောဂါ
အလွန်နိမ့်သွေးဖိအားလက္ခဏာ (lightheadedness, ပျို့, စေးအရေပြား, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကို, စိတ်ကျရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်မူးဝြေခင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်)
flibanserin နှင့်အတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေး interaction ကကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်လူနာနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။ Addyi အသည်းချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာ၌၎င်း, အလယ်အလတ်-to-ခိုင်မာတဲ့ CYP3A4 inhibitors ယူပြီးလူနာအတွက်အရက်အတူအသုံးပြုမှုအတွက် contraindicated ဖြစ်ပါတယ်။ Addyi လုံခြုံအသုံးပြုမှု (ETASU) အဖြစ်တစ်ဦးက Black Box ကိုသတိပေးခြင်းအာမခံဖို့ဒြပ်စင်ပါဝင်သောတစ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချရေးမဟာဗျူဟာ (REMS) နဲ့အတည်ပြုခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုဒေတာအသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးဝြေခင်း, ပျို့ခြင်းနှင့်အိပ်ခဲ့ကြပြသခဲ့သည်။ အရက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါနေခြင်းဖြင့်သတိလစ်များ၏အန္တရာယ်, အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ဒီအပြန်အလှန်ရန် Addyi သာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဆေးဆိုင်များအနေဖြင့်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများလူနာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော Addyi ညွှန်ကြားပေးမီအရက်ရှောင်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးဒီအပြန်အလှန်အပေါ်ရပါမည်ဆုံးမစကားကိုအကဲဖြတ်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ နေခြင်းဖြင့်သတိလစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Addyi ၏ပျက်ပြားနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟုအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ CYP3A4 inhibitors နှင့်အတူကြောင့်မူးယစ်ဆေး interaction ကမှတိုးလာနေပါတယ်။ FDA ကပိုကောင်း flibanserin နှင့်အရက်အကြားအပြန်အလှန်သတ်မှတ်ဖို့နောက်ထပ် Post-စျေးကွက်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်ထုတ်လုပ်သူလိုအပ်နေပါသည်။
Flibanserin Buy ကုန်ကြမ်း Powder
စျေးကွက်များတွင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရှိပါတယ် Flibanserin အမှုန့်များသောအားဖြင့် ၆၀% မှ ၉၉% အတွင်းများသောအားဖြင့် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသော Flibanserin အမှုန့်များသည်များသောအားဖြင့်ဆေးဝါးအဆင့်တွင်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းသော်လည်း Flibanserin ဆေးကိုပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိမရှိ၊ ၀ န်ဆောင်မှုကဘာလဲ… AAS သည်ဤအရာအားလုံးကိုသင့်အတွက်ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်။
10468 Views စာ
ခံတွင်း turinabol အမှုန့်: သင် Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိသလား? Lorcaserin အမှုန့်: ကောင်ဆီဥကိုအရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို